‘कोदो लानुस्, चामल ल्याइदिनुस्’ – NewsAgro.com
‘कोदो लानुस्, चामल ल्याइदिनुस्’
September 15, 2015 newsagro0Comments Agriculture, gorkha, Nepal, Newsagro.com, rice
यो समाचार 304 पटक पढिएको
गोरखाबजार, २९ भदौ बारपाक–८ का बुद्धिबहादुर घले पिँढीमा फिजाएको कोदो पाथीमा भर्दै हुनुहुन्छ । एक पाथी, दुई पाथी गर्दै उहाँले पाँच मुरी कोदो गोदाममा भण्डारण गर्नुभयो । बीस पाथीको एक मुरी मानिन्छ ।
कोदो पिसेर बनाइएको पीठोको रोटी र ढिँडो खाने गरिएको घलेको भनाइ छ । रक्सी बनाउने मुख्य कच्चापदार्थका रुपमा पनि कोदोको प्रयोग गरिन्छ । कोदोको परिकारले बिहान–बेलुकाको छाक टार्दै आएको बताउने घलेका अनुसार बारपाकमा खेती हुनेमध्ये प्रमुख बालीमा कोदो हो । “यस वर्ष आठ मुरी कोदो भित्र्याएँ,” घलेले भन्नुभयो – “भूकम्पले घर भत्केपछि तीन मुरी कोदो माटोमा पोखियो ।” धुलोमा पोखिएको कोदाको दाना चाल्नोले चाल्दासमेत छान्न सकिएन । धुलोमा मिसिएको कोदो घलेको जहानले एक साता लगाएर तीन पाथी निकाल्नुभयो । तर मानिसले खानयोग्य भएन, घरपालुवा जनावरलाई खुवाइयो ।
बारपाकमा खेत छैन । किसानले बारीमा कोदो, गहुँ, आलु, सिमीलगायत बाली लगाउँदै आएका छन् । नौ मुरी अन्नले एउटा सानो परिवारलाई वर्षभरि खान पुग्छ भन्ने गाउँघरतिर मान्यता छ । “भूकम्पले कोदो नष्ट नगरेको भए बेसाएर खान पर्दैनथ्यो,” घलेले भन्नुभयो – “चिसो ठाउँमा भातभन्दा कोदोको परिकार रुचाइन्छ ।” कोदोको परिकार खाँदा हैरान भएको बताउँदै घलेले भन्नुभयो – “कोदो लैजानूस्, चामल ल्याइदिनूस् ।” महाभूकम्पपछि विभिन्न सहयोगी सङ्घसंस्थाले चामल वितरण गरेका थिए । दुई बोरा चामल पाएको भन्दै घलेले मुख फेर्ने काम भएको बताउनुभयो । केही वर्षअघिसम्म बारपाकमा चाडबाडका बेला मात्रै चामलको भात खाने चलन थियो ।
सडक सञ्जाल पुगेपछि आर्थिक सम्पन्नता भएका मानिस भात खान्छन् । भातले भन्दा कोदोले शक्ति दिने घलेको विश्वास छ । “ढिँडो र सिस्नुको तरकारी खानुको बेग्लै आनन्द छ” उहाँले भन्नुभयो – “बजारबाट ल्याएको तरकारी बेस्वादको हुन्छ ।” पछिल्लो समय बारपाकीले बजारबाट तरकारी खरिद गरी लैजाने चलन बढेकामा उहाँले विरोध गर्नुभयो । उहाँले यस वर्ष ४० भारी ९थुन्से० मकै उत्पादन भएको बताउनुभयो । वडा नं ५ को सिप्रङ र ४ को स्याप्रङ क्षेत्रमा खेतीयोग्य जमिन प्रशस्तै छ । वडा नं ७ का रामबहादुर घलेले पनि यस वर्ष कोदो, मकैलगायत बाली भित्र्याउनुभएको थियो । भूकम्पले घर भत्काएपछि अन्नपात खेर गएको घलेको गुनासो छ ।
“दुःख गरेर भित्र्याएको अन्न भूकम्पले घरभित्रै पु¥यो,” उहाँले भन्नुभयो – “आफूलाई बढी भएर कोदो बेचिन्थ्यो । यसपाला अनिकाल लाग्ने भयो ।” घलेको मुख्य पेसा कृषि हो । भूकम्पपछि उहाँले निगालोको चोयाले डोको, थुन्से, नाम्लोलगायत सामग्री बुन्ने काम गर्नुभएको छ । “थुन्सेलाई तीन सय रुपैयाँमा बेच्छु, डोकोलाई एक सय ८० मा ” – उहाँले भन्नुभयो । घलेको परिवार टहरोमा बस्दै आएका छन् । घर भत्किएपछि नयाँ कपडा, किताबकापी खरिद गर्न मुस्किल परेको घलेको दुखेसो छ । “सबैले हुनेखानेलाई हेर्दा रहेछन्,” उहाँले भन्नुभयो – “गरिबलाई घर बनाउने पैसो सरकारले छिटो देओस् ।” सरकारले घर पुनःनिर्माणमा सहयोग गरिदिए ढुक्क भएर खेतीपाती पर्ने घलेको सोच छ । भूकम्पप्रतिरोधी मौलिक प्रकारको घरमा बस्ने घले परिवारको इच्छा छ ।
स्थानीयवासी विर्षराज घलेले अधिकांश बारपाकी किसानको घर भत्किएकाले कोदो, मकै, सिमीलगायत बालीको बीउ अभाव भएको बताउनुभयो । “घरभित्र भण्डारण गरेको अन्न खेर गयो,” उहाँले भन्नुभयो – “बीउ जोगाउन सकिएन ।” स्थानीय जातको बीउ लोप हुने अवस्था देखिएको उहाँको भनाइ छ । विकासे जातका बीउले बारपाकको हावापानीमा राम्रो उत्पादन नदिने किसानको गुनासो छ ।
जिल्ला कृषि विकास कार्यालयका वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत तीर्थकुमार श्रेष्ठले नयाँ जातका बीउ भूकम्पपीडितलाई वितरण गरिएको बताउनुभयो । विभिन्न राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको सहयोगमा बीउ वितरण गरिएको उहाँको भनाइ छ । स्थानीय जातका बीउ पाउन मुस्किल रहेको भएपनि सकेसम्म स्थानीय जातको बीउको खोजी गरिएको श्रेष्ठले बताउनुभयो । भूकम्पले गोरखाको दुई नगरपालिकासहित ६० गाविसका ५८ हजार घरधुरी बस्नै नहुने गरी भत्किएको थियो । घरभित्र भण्डारण गरिएका अन्न माटोमा मिलेपछि बीउको अभाव देखिएको हो ।
← मकैमा आत्मनिर्भर बन्दै सुर्खेत
सामुदायिक बीउ भण्डारण केन्द्र स्थापना गरिने →
उखुखेतीमा समस्या, किसान पलायन हुने क्रम बढ्दो
January 10, 2014 newsagro 1
धनुषामा धान उत्पादनमा कमी
December 12, 2013 newsagro 0
भूकम्प पीडितको चामल कर्णालीका जनतालाई
April 21, 2016 newsagro 0
प्रधानमन्त्री ‘कृषि आधुनिकीकरण’ परियोजनाको रकममा ‘स्थानीय निकाय’ को ब्रम्हलुट !
बाढीको डुवानमा परेको क्षेत्रमा यसरी गरौं वैकल्पिक खेती !
९० प्रकारको पोषण तत्व र ४६ किसिमको एन्टी अक्सिडेन्टको धनी : तराई मधेशमा हुने मोरिङ्गा(मुनगा) को अद्भूत बिशेषता
लिने होइन त ? मिल्किङ्ग मेसिनमा ५० प्रतिशत अनुदान !
ओली सरकारको प्राथमिकता दुई वर्षमा खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर
केपी शर्मा ओली फेरी प्रधानमन्त्री
कालो धन र कालोबजारीको पक्षमा ओलीको पक्षपोषण
एमालेले देउवा सरकारमाथि लगायो ११ बुँदे गम्भिर आरोप
अब वृद्ध भत्ता ६५ वर्षमै दिने सरकारको निर्णय
‘उच्च प्रतिफल दिने मत्स्य क्षेत्र बेवारिसे’
नाफामूलक कृषि व्यवसाय कसरी गर्ने ?
नेपालमा डेरीका समस्या र योगदान
यसरी बनाउन सकिन्छ निर्वाहमुखी कृषिलाई व्यवसायमुखी
दैलो–दैलोमा कृषकको अधिकार
वायु प्रदूषणबाट बर्षेनी नेपालमा ३५ हजारको मृत्यु
ताइवानमा शक्तिशाली भूकम्प, चार जनाको मृत्यु, २२५ घाइते
वन्यजन्तुको स्वास्थ्यसम्बन्धी नौबुँदे सौराहा घोषणापत्र जारी
भूकम्प प्रतिरोधी घर निर्माण गर्न प्रधानमन्त्रीको आव्हान
जलवायु परिवर्तनले मध्य पहाडमा फलफूल र उच्च हिमालमा धानको उत्पादन